Amai Mujuru Voburitsa Kusawirirana Kwavo neHama dzeMurume Wavo
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti vachiri kukahadzika kuti moto wakauraya vaimbova mutungamiri wemauto, Va Solomon Mujuru, wakabva kupi. VaMugabe vanoti nehuchenjeri hwaiva naVa Mujuru, havaifanira kufa nemufiro avakaita. Va Mugabe vakataura izvi panyaradzo yakaitirwa mushakabvu kupurazi rake re Ruzambo Alamaine riri ku Beatrice.
VaMugabe vakati VaMujuru munhu akapona munjodzi dzakawanda dzemoto. Vakati VaMujuru vakapotsa vatsvira mune imwe hotera paiitwa nhaurirano kuGeneva Conference Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere.
Mukuru wemauto emuchadenga, VaPerence Shiri, avo vakataura vakamirira mukuru-mukuru wemasoja, Va Constantine Chiwenga, vakatsanangurawo VaMujuru semunhu aida nyika yake zvikuru uye aive nehungwaru hwakadzama. Vakati vachiri kuhadzika kuti chii chakokonzera kuti VaMujuru vafe.
Mumwe wevafundisi vakataura panyaradzo iyi, VaKenias Ndanga, vakakurudzira vakuru-vakuru muchiuto kuti vasarambe kuchengetwa nemasoja kana vachinge vasiya sezvinonzi ndizvo zvakaitwa naVaMujuru vakazopedzisira vafa vachisiya mibvunzo yakawanda pamiromo yeveruzhinji.
Mudzimai wemushakabvu, uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, vakati vakanga vasingagare zvakanaka nemurume wavo uye vakati vana vemushakabvu vese vasati vazivikananwa, vanofanira kuongororwa ropa kuti vana vava mujuru here kana kuti kwete.
Amai Mujuru vakati kana vana ava vari vemufi zvechokwadi, vachavachengeta.
Vakati vakaroorwa naVaMujuru muna 1977 vakagara vese kwemakore makumi matatu nemaviri.
Amai Mujuru vakabutitsawo pachena kuti havasi kuwirirana nehama dzemurume wavo, vakakukmbira hama idzi kuti dzivatore semumwe wemumhuri yemufi.
Amai Mujuru vakati havasi kuzoroorwa zvakare zvichitevera kufa kwakaita murume wavo gore rapera.
Gweta riri kumirira mhuri yemushakabvu, VaThakor Kewada, vanoti vane hurongwa hwekukumbira makurukota anoona nezvinoitika mukati menyika kuti mutumbi wemushakabvu ufukunurwe pamarinda anovigwa magamba enyika kuitira kuti uongororwe patsva zvichitevera ongororo yedare ramejasitiriti iro rakabuditsa kuti pahumbowo hwakasvitswa kudare, hapana humbowo hunoratidza kuti VaMujuru vanogona kunge vakapondwa